‘Congratulations Liverpool, you are the champion’ လို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြောသွားခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး နည်းပြ ပက်ဂွာဒီယိုလာ - SPORTS MYANMAR
‘Congratulations Liverpool, you are the champion’ လို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြောသွားခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး နည်းပြ ပက်ဂွာဒီယိုလာ
ပက်ဂွာဒီယိုလာ က မနေ့ညက နော့ဝှစ် အသင်းကို မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်း ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ခြင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် Title race မှာ လီဗာပူး ကို လက်ဦးခွင့် ပေးလိုက်ရပြီ ဆိုတဲ့ ပြောဆို မှုတွေကို ပယ်ချ သွားခဲ့ ပါတယ်။ မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်းဟာ တော့တင်ဟမ် ကို အီတီဟတ် မှာ သရေ ကျခဲ့တာကြောင့် ဒီရာသီ ရမှတ် ၂ မှတ် ဆုံးရှုံး ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ မနေ့ညက Carrow Road မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် တန်းတက် နော့ဝှစ် အသင်းကို အံ့ဖွယ် ၃ – ၂ နဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ တာကြောင့် နောက်ထပ် ရမှတ် ၃ မှတ် ထပ်မံ ဆုံးရှုံးကာ ဒီရာသီ ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲ ရရှိနေတဲ့ ပြိုင်ဘက် လီဗာပူး အသင်း နဲ့ ငါးမှတ် ကွာဟ သွားခဲ့ ပါတယ်။
နော့ဝှစ်ကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးကာ လီဗာပူး နဲ့ စောစောစီးစီး ငါးမှတ် ပြတ်နေ ပေမယ့်လည်း စီးတီး နည်းပြ ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီဟာ အရမ်းကို စောနေ သေးတယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
ပက်က “ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုမှ စက်တင်ဘာလ မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အိုကေ? လီဗာပူးကို ဂုဏ်ပြု ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ချန်ပီယံပါ…စက်တင်ဘာလပဲ ရှိနေ ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာလုပ် သွားရမလဲ? ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည် ရုန်းထွက် ရပါမယ်။ လေ့ကျင့်မှုတွေ လုပ်ပြီး ပြန်လာ ရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရမှတ် ၅ မှတ် ဆုံးရှုံး ထားပါတယ်။ တော့တင်ဟမ် နဲ့ ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အရမ်း ကောင်းအောင် ကစား နိုင်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘာလုပ် ရမလဲ ဆိုတာ အတိအကျ သိနေ ရပါမယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ပြိုင်ဘက် နော့ဝှစ် အသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပက်က “နော့ဝှစ်ကို ဂုဏ်ပြု ပါတယ်။ သူတို့ ရခဲ့တဲ့ ပထမဂိုးဟာ set-piece ကနေ ရခဲ့တာပါ။ ဒုတိယဂိုး ကတော့ တန်ပြန် တိုက်စစ်ကနေပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို ဂုဏ်ပြု ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပဲ ဖြစ်ရမှာပါ။ ကျွန်တေ်ာတို့ ဒီပွဲကနေ လေ့လာသင်ယူပြီး ရှေ့ဆက် သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှုတွေ ဒီလောက် မဆိုး ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီး နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီနေ့မှာ သူတို့ထက် ဂိုးတွေ ပိုမသွင်း နိုင်ခဲ့ ပါဘူး။
သူတို့ဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပြီး ကစားသမား ကောင်းတွေ ၊ အရည်အသွေါ် ကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာတို့ ဒါကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲမှာ ကတည်းက တွေ့ထား ပြီးသားပါ။ သူတို့ ဒီနေ့မှာ အခွင့်အရေး တွေကို ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချ သွားခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဂိုးဧရိယာထဲမှာ ပုံမှန် ကစား နေကြ ပုံစံအတိုင်း အင်တိုက်အားတိုက် မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဘောလုံးမှာ အမှားတွေကို အမြဲတမ်းတော့ ရှောင်လွှဲလို့ မရ ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ ဂိုးပေါက်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ကန်သွင်း ရလဲ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ကန်သွင်း ရလဲ ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးမှာ ဂိုးတွေ နဲ့ ပင်နယ်တီ ဧ၇ိယာ ထဲမှာ လုပ်ဆောင်မမှု တွေ ကသာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပက်ဂွာဒီယိုလာ ဟာ နော့ဝှစ် နဲ့ ပွဲမှာ ခံစစ် ကစားပုံ ဆိုးရွား ခဲ့ကြတဲ့ ဂျွန်စတုန်း နဲ့ အော်တာမန်ဒီ တို့ရဲ့ ဗဟို ခံစစ် အတွဲနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာမှ စိုးရိမ်မှု မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကစားသမား ၂ ဦးစလုံးဟာ နော့ဝှစ် ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေမှာ အမှားတွေ ကျူးလွန် ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရ ပါတယ်။
ပက်က “သူတို့ဟာ အကြိမ် တော်တော်များများ တွဲဖက် ကစား ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ အခု အသုံးပြု နိုင်တဲ့ ဗဟို နောက်ခံလူ တွေပါ။ ဒီလို အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကောင်း တစ်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂိုးရှေ့ကို ၃ ၄ ကြိမ်ပဲ ရောက်လာ ခဲ့တာပါ။ တစ်ချိန်တည်း မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ် နိုင်သလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ့် ကစားသမား တွေကို ချစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ အတူ ရှိနေတာ ဂုဏ်ယူ စရာပါ။
လူတွေ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန်လုံး အမှတ် ၁၀၀ ရမယ်လို့ မျှော်လင့် မနေသင့် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အခု ပြန်လည် အားဖြည့် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ပြန်လာ ခဲ့ပါမယ်။ ပုံမှန် အားဖြင့် ကျွန်တော်ဟာ သူတို့ အခွင့်အရေး ဘယ်လောက် ဖန်တီး ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လေ့ ရှိပါတယ်။ သူတို့ ဒီနေ့ပွဲမှာ ဂိုးသွင်း နိုင်ဖို့ အတွက် အခွင့်အရေး အများကြီး ဖန်တီး ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တေ်ာ မခံစား မိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါမျိုးဟာ ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်တက်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
‘Congratulations Liverpool, you are the champion’ လို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပွောသှားခဲ့တဲ့ မနျစီးတီး နညျးပွ ပကျဂှာဒီယိုလာ
ပကျဂှာဒီယိုလာ က မနညေ့က နော့ဝှဈ အသငျးကို မနျခကျြစတာစီးတီး အသငျး ရှုံးနိမျ့ သှားခဲ့ခွငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ Title race မှာ လီဗာပူး ကို လကျဦးခှငျ့ ပေးလိုကျရပွီ ဆိုတဲ့ ပွောဆို မှုတှကေို ပယျခြ သှားခဲ့ ပါတယျ။ မနျခကျြစတာစီးတီး အသငျးဟာ တော့တငျဟမျ ကို အီတီဟတျ မှာ သရေ ကခြဲ့တာကွောငျ့ ဒီရာသီ ရမှတျ ၂ မှတျ ဆုံးရှုံး ထားခဲ့ပွီး ဖွဈကာ မနညေ့က Carrow Road မှာ ပရီးမီးယားလိဂျ တနျးတကျ နော့ဝှဈ အသငျးကို အံ့ဖှယျ ၃ – ၂ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ သှားခဲ့ တာကွောငျ့ နောကျထပျ ရမှတျ ၃ မှတျ ထပျမံ ဆုံးရှုံးကာ ဒီရာသီ ရာနှုနျးပွညျ့ နိုငျပှဲ ရရှိနတေဲ့ ပွိုငျဘကျ လီဗာပူး အသငျး နဲ့ ငါးမှတျ ကှာဟ သှားခဲ့ ပါတယျ။
နော့ဝှဈကို အဝေးကှငျးမှာ ရှုံးကာ လီဗာပူး နဲ့ စောစောစီးစီး ငါးမှတျ ပွတျနေ ပမေယျ့လညျး စီးတီး နညျးပွ ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီဟာ အရမျးကို စောနေ သေးတယျလို့ ဆိုလိုကျ ပါတယျ။
ပကျက “ကြှနျတျောတို့ဟာ အခုမှ စကျတငျဘာလ မှာပဲ ရှိပါသေးတယျ။ အိုကေ? လီဗာပူးကို ဂုဏျပွု ပါတယျ။ ခငျဗြားတို့ဟာ ခနျြပီယံပါ…စကျတငျဘာလပဲ ရှိနေ ပါသေးတယျ။ ကိုယျ့အနနေဲ့ ဘာလုပျ သှားရမလဲ? ကြှနျတျောတို့ ပွနျလညျ ရုနျးထှကျ ရပါမယျ။ လကေ့ငျြ့မှုတှေ လုပျပွီး ပွနျလာ ရမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့ ရမှတျ ၅ မှတျ ဆုံးရှုံး ထားပါတယျ။ တော့တငျဟမျ နဲ့ ပှဲမှာ ကြှနျတျောတို့ အရမျး ကောငျးအောငျ ကစား နိုငျခဲ့ ကွပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ အရေးကွီးတဲ့ အပိုငျး တှမှော ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ ဘာလုပျ ရမလဲ ဆိုတာ အတိအကြ သိနေ ရပါမယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ပွိုငျဘကျ နော့ဝှဈ အသငျးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ နဲ့ ပကျသကျပွီး ပကျက “နော့ဝှဈကို ဂုဏျပွု ပါတယျ။ သူတို့ ရခဲ့တဲ့ ပထမဂိုးဟာ set-piece ကနေ ရခဲ့တာပါ။ ဒုတိယဂိုး ကတော့ တနျပွနျ တိုကျစဈကနပေါ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ကို ဂုဏျပွု ပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးပဲ ဖွဈရမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့ ဒီပှဲကနေ လလေ့ာသငျယူပွီး ရှဆေ့ကျ သှားမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှုတှေ ဒီလောကျ မဆိုး ခဲ့ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အခှငျ့အရေးတှေ ဖနျတီး နိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒီနမှေ့ာ သူတို့ထကျ ဂိုးတှေ ပိုမသှငျး နိုငျခဲ့ ပါဘူး။
သူတို့ဟာ တကယျကောငျးတဲ့ အသငျး ဖွဈပွီး ကစားသမား ကောငျးတှေ ၊ အရညျအသှျေါ ကောငျးတှေ ရှိနပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဒါကို ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈ ခနျြပီယံရှဈ ပွိုငျပှဲမှာ ကတညျးက တှထေ့ား ပွီးသားပါ။ သူတို့ ဒီနမှေ့ာ အခှငျ့အရေး တှကေို ပိုငျနိုငျစှာ အသုံးခြ သှားခဲ့ ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဂိုးဧရိယာထဲမှာ ပုံမှနျ ကစား နကွေ ပုံစံအတိုငျး အငျတိုကျအားတိုကျ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဘောလုံးမှာ အမှားတှကေို အမွဲတမျးတော့ ရှောငျလှဲလို့ မရ ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ဒီနေ့ ဂိုးပေါကျကို ဘယျနှဈကွိမျ ကနျသှငျး ရလဲ ဒါမှမဟုတျ သူတို့ ဘယျနှဈကွိမျ ကနျသှငျး ရလဲ ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဘောလုံးမှာ ဂိုးတှေ နဲ့ ပငျနယျတီ ဧရိယာ ထဲမှာ လုပျဆောငျမမှု တှေ ကသာ အဓိက ဖွဈပါတယျ။” လို့ ပွောသှား ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ပကျဂှာဒီယိုလာ ဟာ နော့ဝှဈ နဲ့ ပှဲမှာ ခံစဈ ကစားပုံ ဆိုးရှား ခဲ့ကွတဲ့ ဂြှနျစတုနျး နဲ့ အျောတာမနျဒီ တို့ရဲ့ ဗဟို ခံစဈ အတှဲနဲ့ ပကျသကျပွီး ဘာမှ စိုးရိမျမှု မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။ အဆိုပါ ကစားသမား ၂ ဦးစလုံးဟာ နော့ဝှဈ ရဲ့ သှငျးဂိုးတှမှော အမှားတှေ ကြူးလှနျ ခဲ့ကွတာ ဖွဈပွီး ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျ နရေ ပါတယျ။
ပကျက “သူတို့ဟာ အကွိမျ တျောတျောမြားမြား တှဲဖကျ ကစား ခဲ့ဖူး ပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကြှနျတျောတို့ အခု အသုံးပွု နိုငျတဲ့ ဗဟို နောကျခံလူ တှပေါ။ ဒီလို အခွအေနေ ဖွဈပါတယျ။ ပှဲကောငျး တဈပှဲ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဂိုးရှကေို့ ၃ ၄ ကွိမျပဲ ရောကျလာ ခဲ့တာပါ။ တဈခြိနျတညျး မှာပဲ ကြှနျတျောတို့ ဘာလုပျ နိုငျသလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျော သိပါတယျ။ ကြှနျတျော ကိုယျ့ ကစားသမား တှကေို ခဈြပါတယျ။ သူတို့နဲ့ အတူ ရှိနတော ဂုဏျယူ စရာပါ။
လူတှေ အနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ တဈခြိနျလုံး အမှတျ ၁၀၀ ရမယျလို့ မြှျောလငျ့ မနသေငျ့ ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အခု ပွနျလညျ အားဖွညျ့ သှားမှာ ဖွဈပွီး ပွနျလာ ခဲ့ပါမယျ။ ပုံမှနျ အားဖွငျ့ ကြှနျတျောဟာ သူတို့ အခှငျ့အရေး ဘယျလောကျ ဖနျတီး ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ကွညျ့လေ့ ရှိပါတယျ။ သူတို့ ဒီနပှေဲ့မှာ ဂိုးသှငျး နိုငျဖို့ အတှကျ အခှငျ့အရေး အမြားကွီး ဖနျတီး ခဲ့တယျလို့ ကြှနျတျော မခံစား မိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါမြိုးဟာ ရံဖနျရံခါ ဖွဈတကျပါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။